BMOI any Toliara : manome fifandraisana manokana | NewsMada
BMOI any Toliara : manome fifandraisana manokana
Miezaka manatona ny mpanjifa hatrany ny banky BMOI. Misokatra any Toliara izao ny masoivoho vaovao, araka ny tanjona napetrany, miaraka amin’ny fanatsarana hatrany ny tolotra omeny. Ny BMOI, banky malagasy voalohany notolorana ISO 9001, ny taona 2016, noho ny zava-bitany. Tombontsoa lehibe ho an’ny mpanjifa ao amin’ity banky ity ny fananany fifandraisana manokana amin’ny mpiasa ao aminy, manampy sy manoro lalana amin’izay tokony hatao sy izay ilaina rehetra.
Manampy betsaka ny mpanjifa koa ny fampiasana teknolojia mifandraika amin’ny filàna ankehitriny, BMOINET, hita any amin’ny finday smartphone, tablettes na ordinatera. Mbola ao koa ireo tetikasa maro hampahafantarina miandalana, hanampy hatrany ny mpanjifa. Na olon-tsotra, mpandraharaha, orinasa, fikambanana, ONG, sns, misy tolotra novolavolaina mifanandrify ho azy ireo ao amin’ny BMOI. Havaozina hatrany ireo tolotra ireo hitazonana ny mpanjifa hifanaraka amin’ny hetahetany.
Tsara ho fantatra fa tompon’ny renivola be indrindra ao amin’ny BMOI ny vondrona BPCE, faharoa any Frantsa, ary manana tambajotra matanjaka iraisam-pirenena. Ahitana taratra azy ny Nosy maro aty amin’ny ranomasimbe Indianina (Maurice, Mayotte, La Réunion, ary Madagasikara).